University of Göttingen - Waxbarashada Bro
gaabinta : BEEN
aasaasay : 1734
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Göttingen
Qor at University of Göttingen
The University of Göttingen , aan rasmi ahayn sida loo yaqaan Georgia Augusta, waa jaamacada guud dhamaystiran cilmi magaalada Göttingen, Germany. aasaasay sannadkii 1734 by George II, King of Great Britain iyo Elector ee Hanover, oo laga bilaabo fasallada 1737, Jaamacada ugu weyn ee ugu da'da weyn ee gobolka of Saxony Hoose iyo is-qoritaan, oo taagan ku dhawaad 26,000. Home tirokoobyada badan xusay, waxay ka dhigan tahay mid ka mid ah hay'adaha taariikhi ah iyo dhaqanka Germany ee. Göttingen ayaa u yeedhay “magaalada sayniska”.
Göttingen waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee Germany, hore oo ay taageerayaan Excellence Jaamacadaha Jarmal ah Initiative. Iyada oo xubin ka Coimbra Group iyo hareeraha 45 Kooxda ku guuleysatay Nobel Prize, jaamacadda jecel caan ah oo caalami ah oo weyn. Jaamacadda waxay leedahay isku xirnaanta xoog leh machadyada cilmi weyn oo ku salaysan in Göttingen sidoo, gaar ahaan kuwa ka mid ah Society Max Planck ee Advancement of Science iyo Gottfried Wilhelm Leibniz Sayniska Bulshada. Iyada oo ku dhowaad 4.5 million volumes, Library Göttingen Gobolka iyo University kaalinta ka mid ah maktabadaha ugu weyn ee Germany.
On ku salaysan guulaha ay cilmi-baarista iyo waxbarashada, Georg-August-Universität Göttingen oo doonaysa in ay kordhin ay sumcad caalami ah by xoogga saaraynaa meelaha ay gaar ah:
Internationality – horumarinta awooddiisa ah inuu soo jiito saynisyahano, culimada iyo ardayda dibadda ka; ballaarinta shabakadaha caalamiga ah iyo wadaagista dhiirinta cilmi iyo dhalinyarada saynisyahano
waxbaridda iyo waxbarashada Research ku salaysan – horumarinta barnaamijyada daraasadda cilmibaadhista la xiriira iyo tababar qolooyinka-wajahan iyo koorasyada waxbarashada sii socota, dugsiyada graduate, iyo kooxaha cilmi-yar, taas oo culimada yar iyo saynisyahano sameeyo cilmi-madax-bannaan
Interdisciplinarity iyo kala duwanaanta – xoogeysaneyso wada shaqeynta ka dhexeeya aadamaha iyo bulshada, cilmiga dabiiciga ah iyo nolosha, iyo ilaalinta ee kala duwanaanta ku xiran in danaha mushkilad xalintu qaabeynta mustaqbalka
madaxbannaani – xoojinta is-mas'uuliyadda of University sida a Law Foundation Dadweynaha, Waxa kale oo ay ka mid yihiin in of looxyadeedii iyo ulaheedii, kulliyadaha iyo hay'adaha
Iskaashiga hay'adaha jaamacad ahayn – kordhin iyo P iskaashi la goobaha cilmi haboon ee sayniska, ganacsiga iyo bulshada
Sciences Dabiiciga ah, Xisaabta iyo Aqbaarta
Kuliyada Beeraha Sciences
Kulliyadda Biology iyo Psychology
Kuliyada Forest Sciences iyo Ecology Forest
Kuliyada Geoscience iyo Juqraafiga
Law, dhaqaalaha Sciences, Social Sciences
Kuliyada culuunta dhaqaalaha
Humanities iyo Theology
In 1734, King George II of Great Britain, oo sidoo kale ahaa Elector ee Hanover, siiyey Ra'iisul Wasaaraha uu ku Hanover, Gerlach Adolph von Munchausen, amarka in la dhiso jaamacad ku Göttingen in ay buunbuuniso fikradaha of xoriyadda aqoonta iyo Aragti waqtiyada Nuurin Yurub. Markii hore, dhismayaasha cusub kaliya oo loo dhisay for furitaanka jaamacadda ahaayeen hall ah fuushan oo fencinghouse a, halka koorsooyinka la baray ee keniisad Paulinerkirche oo la xiriira Dominican, ama Guryaha Professor. No auditorium jaamacadda waxaa la dhisay ilaa iyo sidoo galay qarnigii 19aad.
Inta ka dhiman ee qarnigii 18aad ee University of Göttingen ahaa darajooyin sare ee jaamacadaha Jarmal, ay ruuxa lacag la'aan ah iyo jawi of sahaminta sayniska iyo cilmi-baarista. Caanka ah ilaa maalmood waa Georg Christoph Lichtenberg, ugu horeysay ee uu u qabto professorship a (1769-99) cad ka go'an in ay physics tijaabo ee Germany. by 1812, Göttingen noqotay jaamacadda caalami ah qiray casri ah maktabadda ka badan 250,000 Muga.
In ka sano ee hore ee Jaamacadda Göttingen u noqday kuwa loo yaqaan ay awood sharciga. Qarnigii 18-Johann Stephan Pütter, Aqoonyahan ugu haybadda leh ee sharciga dadweynaha wakhtigaas, baray publicum Bilgium kuw halkan nus qarni ah. maado ayaa ardayda sida Klemens Wenzel Lothar von Metternich jiitay, Diblomaasi ka dib iyo Ra'iisul Wasaaraha ee Austria, iyo Wilhelm von Humboldt, oo markii danbe la aasaasay Jaamacadda Berlin. In 1809 Arthur Schopenhauer, Faylasuuf Jarmalka wanaagsan ee loo yaqaan ay shuqulkiisa u sameeyaan Adduunka sida Will iyo Matalaadda, noqday arday ee jaamacadda, halkaas oo uu ka bartay metaphysics iyo cilmi nafsiga hoos Gottlob Ernst Schulze, oo isaga lagula talinayaa in ay xoogga saaraan Plato iyo KANT.
By centenary jaamacadda ee 1837, waxaa loo yaqaan “jaamacadda sharciga”, sida ardayga ka diiwaan gashan by kuliyadda sharciga inta badan ka kooban in ka badan nus ka mid ah ardayda jaamacadda ee. Göttingen noqday Mecca a waxbarasho sharciga guud ee Germany. Heinrich Heine, Abwaan caan ah German, bartay sharciga, waxaana la gudoonsiiyey shahaado ee Dr.iur..
Si kastaba ha ahaatee, rabshooyin siyaasadeed, taas oo macalimiinta iyo ardayda labadaba waxa ay ku lug, hoos u dhigan karo si 860 in 1834. eryidda ee 1837 oo ka mid ah toddoba Professor - Göttingen Toddoba The - Germanist ah, Wilhelm Eduard Albrecht (1800-1876); taariikhyahan Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860); orientalist ku Georg Heinrich August Ewald (1803-1875); taariikhyahan Georg Gottfried Gervinus (1805-1875); Eduard physicistWilhelm ku Weber (1804-1891); iyo philologists ah, walaalaha Jakob (1785-1863) iyo Wilhelm Grimm (1786-1859), mudahaaraaday noqosho ah by King Ernest Augustus I ee Hanover dastuurka deeqsi ah 1833, dheeraad ah hoos u barwaaqada ay jaamacadda. Ka hor this, Grimm Brothers uu halkan baray oo ay diyaarisey Dictionary ugu horeeyay ee Jarmal.
Qarnigii 19aad, Gustav Hugo, horseed ah[caddaynta loo baahan yahay] dugsiga taariikhiga ah ee sharciga, andRudolf of Jhering, jurist ah kan Abuuray aragtida ah ee “contraendo masuul ka” oo qoray Battle for Right, halkan baray iyo sumcadda kuliyadda sharciga hayo. Otto von BISMARCK, abuuraha ugu weyn iyo Chancellor koowaad ee Empire labaad Jarmal, ayaa sidoo kale bartay sharciga ee Göttingen in 1833: wuxuu ku noolaa guri yar oo ku saabsan “Wall”, oo hadda loo yaqaan “BISMARCK Cottage”. Sida laga soo xigtay dhaqanka iyo af, uu halkaas ku noolaa maxaa yeelay, rowdiness isaga ka dhigay in la mamnuucay ka nool derbiyada magaalada dhexdeeda.
Göttingen sidoo kale foogan sayniska dabiiciga ah, gaar ahaan xisaabta. Carl Friedrich Gauss halkan baray in qarnigii 19. Bernhard Riemann, Peter Gustav Lejeune Dirichlet iyo tiro ka mid ah xisaabyahannada weyn sameeyey kaalintii ay xisaabta halkan. by 1900, David Hilbert iyo
In 1903, Macalimiin ay tiriyey 121 iyo ardayda 1529. Ludwig Prandtl biiray jaamacadda ee 1904, oo waxaa u hormaray hoggaamiye ee makaanikada dheecaan iyo aerodynamics labaatankii sano ee soo socota. In 1925, Prandtl waxaa loo magacaabay agaasimaha Kaiser Wilhelm machadka farsamo Dheecaan. Waxa uu soo bandhigay fikradda ah lakabka xuduud iyo aasaasay aerodynamics xisaabeed by xisaabinta socodka hawada jihada dabaysha hoos. Qaar badan oo ka mid ah ardayda Prandtl tegey on inay tabarucaad aasaaska loo aerodynamics.
From 1921 si ay u 1933, koox aragti physics la hogaaminayo Max dhashay, kuwaas oo, inta lagu jiro waqtigan, noqday mid ka mid ah saddex discoverers ah aragtida ah non-relativistic ee makaanikada galmada. Waxa uu sidoo kale laga yaabaa in ay leeyihiin ugu horeysay in ay soo gudbiyaan in ay xiriir la probabilistic physics classical. Waxay ahayd mid ka mid ah xarumaha ugu weyn ee horumarinta physics casri ah.
Si aad u taariikhda, 47 Laureates Nobel Prize Akhrisatay, halkan darsaday baray ama ka dhigay. Inta badan marinno, kuwaas oo la siiyey in qeybtii hore ee qarnigii 20-, kaas oo loo yaqaan “Göttingen Nobel yaab”.
alifay Jarmal ee engine jet ah, Pabst von Ohain, sidoo kale bartay aerodynamics in Goettingen hoos Ludwig Prandtl.
cilmiga bulshada iyo barashada insaaniyadda sii waday in ay ku barwaaqoobi. Edmund Husserl, ka Faylasuuf oo la garanayo sida ofphenomenology aabbihiis oo, halkan baray. Max Weber, sociologist halkan bartay waayo, mid dheer.
Inta lagu jiro wakhtigan, af Jarmal noqday an luqada tacliimeed ee caalamiga ah. Tiro ka mid ah dissertation ee UK iyo US ee lahaa horyaal Jarmal. Mid ka mid ah waa la tixgelin karaa isagoo tababar tacliimeed dhamaystiran oo keliya marka mid ka mid ah uu soo bartay Germany. Thus, arday badan American ahaayeen faani isagoo bartay Germany, iyo University of Göttingen lahaa saamaynta qoto dheer on Maraykanka. Tiro ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka, qareennada, taariikhyahanadu iyo qorayaasha ay waxbarashada ka Harvard iyo Göttingen helay. Tusaale ahaan,Edward Everett, mar Secretary of State iyo Madaxweynaha Harvard University, nagaadeen Göttingen muddo laba sano oo waxbarasho. George Ticknor qaatay laba sano waxbarasho Classics in Göttingen. John Lothrop jaho, diblomaasi iyo taariikhyahan, xataa lahaa saaxiibtinimo shaqsi ah la Otto von Bismark intii uu daraasadda laba-sano dheer ee Göttingen. George Bancroft, siyaasi iyo taariikhyahan, xataa PhD ka qaatay Jaamacadda Göttingen in la helay 1820.
Ka dib dagaalkii labaad ee dunida, Jaamacadda Göttingen ahaa jaamacadda ugu horeysay ee Zones galbeedka in la dib loo furay gacanta Ingiriiska 1945. Jürgen Habermas, Faylasuuf a Jarmal iyo sociologist, in Göttingen eryadeen daraasad halkaan. Later, Richard von Weizsäcker, Madaxweynihii hore ee Germany, kasbadeen uu Dr.Jur. here.Gerhard Schröder, Chancellor hore ee Germany, Waxa kale oo ka qalin jabiyay dugsiga sharciga halkan Göttingen, oo wuxuu intaas ka dib wuxuu noqday qareen.
Felix Klein ayaa xisaabyahannada soo jiitay oo dunida ku baahsan in Göttingen, taas oo ka dhigtay Göttingen caalami ah Mecca ee xisaabta ee bilowgii qarnigii 20aad.
Muddadan, Jaamacadda Göttingen gaari ay peak tacliimeed.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Göttingen ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Göttingen rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Göttingen
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Göttingen.